लकडाउनबारे विज्ञका तीन मत - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २१, २०७७ समय: ८:१८:३०
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको परामर्शमा जनस्वास्थ्यविज्ञले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मुख्य तीन सुझाव दिएका छन् । पहिलो सुझाव छ,कर्फ्युसहितको लकडाउन । दोस्रोमा लकडाउन र तेस्रो आंशिक लकडाउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोभिड–१९ सँग जुध्न सरकारले गरेको काम र प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए । सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले जनतामा जति चेतना बढाउन सकिन्छ, कोभिडसँग लड्न त्यत्ति नै सजिलो हुने स्पष्ट पारे । तर, आफ्नै पार्टी (नेकपा)का नेताहरूमा अहिले गैरजिम्मेवारपन देखिएको उनको गुनासो थियो । उनले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीसीएमसी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेर उचित निर्णय लिइने बताएका थिए ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले १५ दिन कडा खालको लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारी दिए । ‘पहिले भारतबाट आएका मात्रै संक्रमित हुन्थे भने अहिले समुदायमा पनि संक्रमित बढेका छन् । हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं र के गर्ने भन्नेबारे हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दियौं’, डा. पाण्डेले भने, ‘१५ दिन कडा खालको लकडाउन गर्ने र त्यसपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने गरी अगाडि बढ्न हामीमध्येका धेरैले सुझाव दिएका छौं ।’
अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले देशभरभन्दा पनि ठाउँविशेषका आधारमा लकडाउन गर्न सुझाव दिइएको बताए । ‘समग्रमा सबैतिर लकडाउन गर्दा आर्थिकलगायत गतिविधि ठप्प हुन सक्छन्’, डा. दीक्षितले भने, ‘कोरोना पनि कति समय रहन्छ भन्ने ठेगान छैन । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा थप मार खेप्नुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर ठाउँविशेषका आधारमा लकडाउन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव मैले दिएको छु ।’
सहभागीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिए । सीमा–नाका व्यवस्थित गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । डा. पाण्डेले भने, ‘लकडाउन घोषणा गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाइ गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पुराना संक्रमितले सार्न सक्दैनन् । नयाँ संक्रमित पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’ चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) की डिन डा. दिव्या सिंह शाह, डा. महेश मास्केलगायतले भने लकडाउन घोषणाले समस्या समाधान नहुने बताएका थिए ।
ओलीले सडकमा मान्छेहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रहरीमा संक्रमण बढी देखा परेको बताएका थिए । ‘प्रहरीलाई किन संक्रमण भएको छ भन्दा उनीहरू सडकमा गएका छन्, संक्रमित मान्छेहरूसँग उनीहरूले डिल गर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘अनेक कामहरूमा उनीहरू छन् । त्यस्ता कामहरूबाट उनीहरू संक्रमितहरू भइराखेका छन् । ड्युटीको क्रममा संक्रमित भइराखेका छन् । रेस्क्यु गर्न जाँदा संक्रमित भएर आएका छन।’
जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले परीक्षणको मात्रा र अस्पतालको प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिए । लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले पहिला पनि लकडाउन गरेको हो । तर त्यसबीचमा जुन ढंगले सरकारले काम गर्‍यो । त्यसबेला समय त्यत्तिकै खेर गयो । सरकारले कामै केही गरेन’, ठाकुरले भने,– ‘लकडाउन थपेरमात्रै समाधान होइन । सरकारको योजना पनि के छ ? । दुई हप्ता थप्ने र भोलि पनि अवस्था उस्तै रहे के हुन्छ ? यसबारे सरकारले के सोचेको छ ? ’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।